May Nyane: ကိုယ်ကျင့်တရား….
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ အလေးထားရမှာပါ။ ချိုကိုလည်း ထောက်ခံပါတယ်။ လူတိုင်းကကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းနေရင် အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့နော်... ချိုကိုဆိုလိုတာက အဲဒါကအရေးမကြီးဘူးလို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုလူတွေကို မပစ်ပယ်ဖို့၊ လူ့ဘောင်ထဲကနေ မထိုက်တန်ဘူးဟဲ့ ထွက်သွားလို့ပြောမယ့်အစား ကောင်းမွန်လာအောင် ၀ိုင်းပြီးမတည့်မတ်ပေးသင့်ဘူးလားလို့ပါ။
လူတိုင်းဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြူစင်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် လူရဲ့ပင်ကိုယ်က အဖြူဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ပြုပြင်ချင်စိတ်ရှိရင်၊ နောင်တများရခဲ့ရင် အခွင့်အရေးပေးသင့်သလားလို့ပါ။ လူတယောက်ကို သူ့ရဲ့မကောင်းတာတွေပဲ ပြောနေမယ့်အစား သူတော်တာလေးတွေ ကောင်းတာလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပေးရင် ချီးမွှန်းပေးရင် သူကိုယ်တိုင်လဲ ကောင်းတဲ့ဖက်ကို စိတ်ကပိုတိမ်းညွှတ်လာမယ်ထင်မိလို့ပါ။ ၃၊၄နှစ်ကလေးတွေကို ထိမ်းသလိုများဖြစ်နေလား မသိဘူးနော်... ချိုကိုတွေးမိသလောက်ပါ ဆရာမရေ... ထပ်စဉ်းစားရင်ထပ်ထွက်လာဦးမှာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပို့စ်အသစ်တစ်ခုတင်လိုက်ပါ့မယ်။
မမ အမေကတော့ ခဏခဏ ပြောဖူးတယ်...
အမှားကျူးလွန်တဲ့လူကို တကြိမ်ထက်ပိုပြီး ပြုပြင်ဖို့ အခွင့်အရေးမပေးသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကတော့ လူ့သက်တမ်း ၅၀ ရှိလာတဲ့ မမအမေရဲ့ အမြင်ပေါ့လေ...
သူ့မှာ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ဖို့ ဥာဉ် ပါလာပြီးသားဖြစ်လေတော့ ပြုပြင်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူးတဲ့...
အဲဒီတော့ မကောင်းတဲ့လူကို အခွင့်အရေး ထပ်မပေးသင့်တော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
အခု မမတို့ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်...
ဒီလူဟာ အမှား တကြိမ်ပဲ ကျုးလွန်ခဲ့လေသလား...ထပ်ခါထပ်ခါ ကျူးလွန်ခဲ့လေသလား...
နောက်ပြီး သူ့အမှားကို နောင်တရခဲ့ ပါရဲ့လား...
သူဟာ တကြိမ်သာ မှားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး...
ခုချိန်ထိ သူ့အမှားကို နောင်တမရသေးကြောင်း၊ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိသေးကြောင်း
သူ့အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကနေတဆင့် သိနိုင်ပါတယ်...
ဒီလိုလူမျိုးကို အခွင့်အရေး နောက်တကြိမ် ပေးသင့်ပါသေးသလား...လို့ မမတော့ ပြန်မေးခွန်း ထုတ်မိပါတယ်...
အန်တီငြိမ်း အပြင်သွားနေလို့ သူပြန်လာမှ အန်တီ့ရဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်ကို ကြည့်ကြရအောင်လေ...
မမရေ... ချိုကိုက လူတဦးတယောက်ကိုပဲ ရည်ရွယ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမတမျိုးထင်နေမှာဆိုးလို့ပါ။ ဒါလေးပြောချင်လို့ပါ။ :)
မမဘလော့ဂ်မှာ ဒီနေ့တင်တဲ့ မမပို့စ်နဲ့ ရီပလိုင်းတွေက တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကို မရည်ရွယ်ကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ ခုနက ကွန်မန့်ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲသာ ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပါ...
ညီမလေးက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောတယ်ယူဆမိခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ...
မမရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်...
အမှားကျူးလွန်သူကို သူ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီး တကြိမ်သာ အခွင့်အရေး ပေးဖို့ စဉ်းစားမိမှာပါ...
နောက်တကြိမ်၊ နောက်တကြိမ်တွေ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေ ညံ့လွန်းရာကျပါတယ်...
ဒါမဲ့ အဲဒီလူက ဘယ်နှကြိမ် မှားထားသလဲ ဆိုတာတော့ သေချာသိဖို့ အမှန်သိဖို့လိုပါတယ်။ နအဖလိုကောင်းကွက်တကွက်တောင်မရှိတဲ့သူ တွေကိုရော ဘလိုဖြေရှင်းမလဲသမီး.. အင်းး၂ခါ၃ခါမှားပြီဆိုရင်တော့ ဘုရားကကို ဟောတာပါ..လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်သွေလွှဲလို့ မမှီဝှဲနဲ့ ကင်းအောင်နေတဲ့လေ။
ဆရာမမေငြိမ်း ခင်ဗျာ ...
ဆရာမ ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတဲ့ ပိုစ့် လေးကို အစမှအဆုံး ၃ ခေါက်တိတိ ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် ဝေဖန်ထားသော အမြင်လေးနှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေး လိုပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရေး မတတ်မှုကြောင့် ရိုင်းစိုင်း သလိုမျိုး ရှိခဲ့ရင်လည်း ရင်ထဲမှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းများ မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ ... ။ မနေနိုင်လွန်းလို့ ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ ။ တတ်လို့ရယ် မဟုတ်ပါဘူး ။ လိုတာရှိလည်း အားမနာတမ်း သွန်သင်ပေးပါ ။ ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်လေးကို "အိပ်မက်အိမ် " မှာ " ဆရာမမေငြိမ်း ရေးသားခဲ့သော ကိုယ်ကျင့်တရား အပေါ် ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင် " ဆိုတဲ့ အမည်လေးနဲ့ ရေးသားထားပါတယ် ။comment မှာ တိုက်ရိုက်ရေးသားချင်ပါတယ် ။ comment မှာရေးရင် များလွန်းနေမှာစို့လို့ ပိုစ့် တစ်ခု အနေနဲ့ ဆွေးနွေးတာကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် ။
မိုးစွေ ( အိပ်မက်အိမ် )
ကိုမိုးစွေရေ...နည်းနည်းလောက်တော့ ၀င်ပြောပါရစေနော်...ဘယ်လိုမှတော့ သဘောမထားပါနဲ့...အန်တီဆိုလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ အကိုရေးထားတဲ့ပို့စ် ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မလုံခြုံတာနဲ့ မတူဘူးလာလို့ပါ...
ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ကြိမ်တော့ မှားတဲ့အရာကို ခွင့်လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးထားတာကို အသုံးချပြီး ထက်မန် ကြူးလွန်လာတာတော့ လက်မခံနိုင်စရာ ပြု ကျင့်ဝတ်ပါ .. သို့ပေမဲ့ ခုလောလောဆယ်တော့ ဘယ်ဟာမှန်မှန်း ဆုံးဖြတ်လို့ မရသေးဘူး။ ဘာပြုလို့ဆိုတော့ ထို လူဟာ တစ်ကြိမ် ခွင့်လွှတ်ပြီးပြီလား . သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်တောင် တိုင်သွားပြီလား ဆို တာ ကိုယ် သေချာ မသိလို့ပါပဲ